नेपालमा पनि खपत हुँदै अर्थोडक्स चिया ? के हो अर्थोडक्स चिया ? «
प्रकाशित मिति : 22 January, 2021 9:02 am
नेपाली चियाको ठूलो हिस्सा खपत हुने भारतबाहेक अन्य तेस्रो मुलुकमा नेपाली चिया उच्च मूल्यमा बिक्छ । विश्वका कुनाकुना पुग्ने नेपाली चिया नेपालकै अधिकांश जिल्लामा अहिले पनि देखिँदैन । अर्थोडक्सलाई स्वास्थ्यबद्र्धक मानिन्छ तर एकातिर गुणस्तरीय र अर्कातिर स्वदेशी उत्पादन भए पनि नेपालमै पहिचान बनाउन सकेको छैन ।
त्यसो त बाह्य बजारमा नेपाली चिया पुर्याएवापत सरकारले छुट दिने गरेको छ । छुट भएकाले पनि बिक्रेताको आँखा नेपाली बजार नपरेको हो । पूर्वी पहाडी जिल्लाको अर्थोडक्स राजधानी (काठमाडौं) समेत नपुग्ने गरेको देखिन्छ । चिया भन्नेबित्तिकै सिटिसी बुझिने र गुणस्तरीय अर्थोडक्स गुमनाम पारिनाले नेपाली खपत घटाइँदै लगेको देखिन्छ । चिया अर्थोडक्स ‘अग्र्यानिकरण’ भएको र ‘अग्र्यानिक’ प्रयासमा रहेकाले महङ्गो पर्नाले आन्तरिक बजारमा नचिनिएको चियाका ‘अग्र्यानिक’ अनुसन्धनकर्ता (इन्सपेक्टर) विशाल केसी बताउँछन् । अर्थोडक्स चिया पनि विभिन्न प्रकारका बनाइन्छ । अनेक स्वाद लिनका लागि अर्थोडक्स चियाबाट कालो टी, ग्रीन टी, यल्लो टीलगायतका प्रकार बनाइन्छ । यी चिया महङ्गो पर्ने र नेपालीले खरिद गर्न नसक्ने भएकाले अर्थोडक्स नचिनिएको केसीको भनाइ छ ।
“हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाइसक्यौँ, निकट भविष्यमै यो काम हुन्छ”, निर्देशक डा. भट्टराईले भने, “लागत पनि घट्छ र किसानले उचित भाउ पाउँछन् ।” गएको वर्ष मात्रै रु तीन अर्ब २० करोड ३९ लाख चार हजारको एक करोड ५० लाख चार हजार ३८० किलो चिया नेपालबाट निर्यात भएको देखिन्छ । यस्तै गत वर्ष रु ११ करोड ७७ लाख ३२ हजारको तीन लाख ४३ हजार ३५३ किलो चिया आयात भएको बोर्डको तथ्याङ्कले देखाउँछ । रासस